Homeसमाचारर’क्सी खाँदै दोहोरी जादै सचिनको पैसा उ’डाउने ? हिजो दुखमा छोरा छो’ड्ने आज सुखमा छोरा सम्झने कस्ती आमा ? (भिडियो सहित)
April 21, 2021 admin समाचार 5315
केहि समय अगा’डीबाट निकै नै भाईरल बनेका सचिन परियारका बुवा तेजेन्द्र परियार बि बा’दमा तानिएका छन् । सचिन परियार कि आमा घरमा हुदा हुदै पनि तेजेन्द्र परियारले अर्को श्रीमती ल्या’एका रहेछन । सचिन परियार भाईरल हुदै गर्दा सचिन प’रियार कि आमा छोराको न्यास्रो लाग्यो,भेट्न पाउनु पर्छ भनेर मिडि’यामा आएपछी झन् च र्को बि बा’दमा आएका हुन् ।
तेजेन्द्र परियारका बुबा बि बाद’मा आईरहदा तेजेन्द्र परियारको दोश्रो श्रीमती मिडि’यामा आएकी छन् । एक बच्चा सहित् घरबाट का’ठमाडौं भेट्न आएको तेजेन्द्र परि’यारकी श्रीमतीले घर भित्रको आन्तरिक कुरा बाहिर ल्या’एकी छन् । दुई जना श्रीमती हुदाहुदै पनि फेरी तेजेन्द्र परियारले अर्को श्रीमती ल्या’उने हल्ला पनि खुले आम बोलेका बेला एक पछी अर्को गो प्या कुरा बा’हिरिन थालेको छ ।
काठमाडौंको होट’लमा बसेका परियारकि श्रीमती घरबाट आए’पछि तेजेन्द्र परियार बेलैमा घर न आएको र राति अबेर ३\_४ बजेसम्म घर नआउ’नेसम्मका कुरा बाहिर ल्याएकी छन् । श्रीमती माथिको कुराको खण्डन गर्दै प्रश्न त्रेस्यौ’दा म कामको लागि बाहिर गएको हु भने मलाई घरमा श्रीमतीको कि च कि च सहन न सकेर बाहिर गएको हु म क लह सहन स’क्दिन म अर्को बिहेसमेत गर्न सक्छु जस्ता ठा डो जवाफ मिडियामा दिएका छन् । यही कुरालाई लिएर नि’र्देशक हरी उदासिले आफ्नो बि’चार राखेका छन। इताजा खबरबाट
April 12, 2021 admin समाचार 5123
October 21, 2020 admin समाचार 12518
March 19, 2021 admin समाचार 4830